Factory otrikaina fiara fitaterana otrikaina, mpamatsy - China mpanamboatra hoditra Upholstery China
Upholstery fiara anatiny 100% PU Microfiber hoditra anatiny
Izy io dia misy fanoherana ny abrasion, fanoherana ny hatsiaka, fahamaivanana, fanoherana ny fahanterana ary endrika malefaka. , Fiarovana ny tontolo iainana sy fisehoana tsara tarehy, io no safidy tsara indrindra hanoloana ny hoditra voajanahary (cowhide sosona voalohany), ankehitriny dia orinasa maro no hivarotra hoditra microfiber ho toy ny sosona omby voalohany amin'ny vidiny lafo.
1mm faux PVC artifisialy hoditra tokana na roa sosona
Raha ampitahaina amin'ny hoditra hafa, ny hoditra PVC dia mora kokoa amin'ny plastika ary tsara kokoa ny manadio, matetika amin'ny servisy lena na lamba famaohana lena. Ny ankabeazan'ireo hoditra vita amin'ny PVC vita amin'ny Bensen dia ao anaty tahiry, mifandraisa aminay azafady raha mila antsipiriany na santionany misimisy ianao.
0.45mm-1.5mm Pu vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra PU ho an'ny fonon'ny seza fiara
Raha ampitahaina amin'ny hoditra PVC, ny hoditra PU dia mahatsapa tanana tsara kokoa ary koa mahatohitra fanoherana. Ny hoditra PU novokarin'i Bensen dia sariaka amin'ny tontolo iainana, raha mila hoditra PU ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Fihenam-bidy lehibe vita amin'ny hoditra vita amin'ny volomparasy Sina PVC ho an'ny fiara maharitra
Ny PVC, fohy ny Polyvinylchlorid, dia misy sosona bebe kokoa ao ambanin'ny fonony. Ny akora fototra ao aminy dia ny polyvinyl chloride, ary ny akora hafa dia ampiana hanatsara ny fanoherana ny hafanana, ny hamafiny, ny fikojakojana. Ny PVC koa dia manana tanjaka avo sy fitoniana tena tsara, ary tsy mora mirehitra, afaka manohitra ny fiovan'ny toetrandro ary mitondra lozika sy trangan-javatra hafa. Izy io dia fitaovana tena tsara, noho ny fiarovana avo lenta azy, noho izany dia hita eny rehetra eny amin'ny fiainana izy amin'ny fiainana andavanandro, karazana vokatra vita amin'ny hoditra isan-karazany dia hita na aiza na aiza, toy ny haingon-trano anatiny, lamba sofa, atin'ny fiara, akanjo, kiraro sy kitapo sns. Ny vokatra vita amin'ny hoditra izay tena mitovy dia vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra
Black Microfiber Suede hoditra voatrolombelona ho an'ny fiara
Ny lanja maivana, maivana kokoa ny 30% noho ny hoditra voajanahary, mahafeno ny tinady famolavolana lanja mavesatra sy ny toekarena solika.
Fivarotana mafana Suede hoditra mainty ho an'ny familiana fiara
Ny hoditra suède mikrofiber dia manambatra ny tombony amin'ny hoditra sy ny lamba, mamadika ny hevitra nentim-paharazana fa ny hoditra dia ambony noho izay rehetra ao an-tsain'ny mpanjifa, mandika ny lamba sentetika, mitondra fironana vaovao ho an'ny fiainana milamina sy milamina amin'ny tontolo iainana.
Mpanamboatra hoditra vita amin'ny legioma PU ho an'ny fiara fitehirizana fiara
Amin'ny fanombohana ny fampandrosoana ny teknolojia vita amin'ny hoditra PVC, ny orinasa hoditra vita amin'ny hoditra an-trano dia taraiky lavitra an'i Eropa. Saingy amin'ny fikarohana sy fampiharana ny hoditra synthetic PU, dia manohy manaraka ny fironana teknika iraisam-pirenena isika amin'ny alàlan'ny fanombohana aloha, teboka fanombohana, haingam-pandeha haingana, ary lasa ivon'ny hoditra sentetika PU any Shina.
Famerenana amin'ny laoniny vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra TSY voaaro amin'ny hoditra
Ny hoditra synthetic PU, raha ny firafitry ny simika dia manakaiky kokoa ny hoditra voajanahary, noho izany dia tsy ho lasa mafy sy mora volo izy, ary miaraka amin'izay dia manana tombony ny loko manankarena sy ny lamina maro.
PU Skin Microfiber ho an'ny fiara, seza fiara tsy tantera-drano, fitehirizana fiara
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny teknolojia vita amin'ny hoditra synthetic PU (polyurethane), ny maodely vaovao misy marika iraisampirenena dia nanomboka nampiasa tsikelikely PU hoditra syntetika ary manana toetra ara-batana ambony amin'ny hoditra synthetic PU.
Hoditra Microfiber Gray ho an'ny fonon'ny seza fiara
Ny microfiber dia vita amin'ny fibre nylon superfine miaraka amina firafitra sy fahombiazana amin'ilay fibre collagen vita amin'ny hoditra voajanahary, namboarina ho lamba tsy tenona miaraka amina rafitra tambajotra telo refy, ary avy eo nofenoina polyurethane miaraka amina rafitra mikroporous misokatra.
Taratasy Suede tsara kalitao tsara alain-tahaka ny hoditra microfiber ho an'ny fiara
Ny suère microfiber dia misy polyamide, izay iray alina monja amin'ny savaivon'ny volo. Bensen dia mampiasa an'ity firafitra ity hiantohana ny fampiononana sy ny fahalemen'ny suède.